RASMI: Mesut Ozil oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga - Wargane News
Home Sports RASMI: Mesut Ozil oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka qaranka Jarmalka Mesut Özil ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah.
Mesut Özil ayaa la kulmay dhibaatooyin fara badan xiliyadii lasoo dhaafay kadib markii uu la kulamay falal cunsurinimo iyo eedeymo kala duwan ee kaga yimid kadib ka qeyb galkiisa koobka aduunka 2018.
Özil ayaa war rasmi ah uuu soo saaray wuxuu ku sheegay in uu isaga fariistay u ciyaarista xulka qaranka Germany kadib markii uu la kulmay dhaleeceen xoogan.
“Waxaan cadeynayaa inaan ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah, fikir dheer kadib, sababtoo ah waxaan dareemayaa cunsurinimo iyo ixtiraam la’aan”.
“Waxaan xirnaa maaliyada Jarmalka oo aad u xiiso badan, laakiin hada go’aankan aad ayay iigu adag tahay, waxaan sameeyay wax walba oo aan u sameyn karo xulka, tababaraha iyo dhamaan shacabka Jarmalka”.
“Marka ay saraakiisha xiriirka kubada cagta dalka Jarmalka ay iila dhaqmeen qaabkan oo kale, ixtiraam la’aan, sababa la xiriira in asal ahaan inaan kasoo jeedo dalka Turkiga, isla markaana laygu dicaayadeeyay arimo siyaasadeed, intaas igu filan”.
Somaliland: “Saddexda Xisbi Qaran Saddex Faras Bay Kala Fuushan Yihiin, Ka Badinayaana Waa Uu Idiin Muuqdaa Ee Codkaaga Ha Ku Khasaarin Mid Aad Ogtahay”